राष्ट्रपति भवनमै महिला ब’ला’त्कृत, यसरी खुल्यो र’ह’स्य, के भन्छन राष्ट्रपति ? — Sanchar Kendra
राष्ट्रपति भवनमै महिला ब’ला’त्कृत, यसरी खुल्यो र’ह’स्य, के भन्छन राष्ट्रपति ?
काठमाडौँ । फ्रान्समा सरकारी अभियोजनकर्ताहरूले प्यारिसस्थित राष्ट्रपति भवनमा भएको भनिएको एउटा बला’त्का’रको घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने थालेका छन्।
एक महिला सैनिकले एलीजे दरबारमा गत जुलाई महिनामा आयोजित एउटा मदिरापान कार्यक्रमपछि आफूमाथि यौ’न दु’र्व्य’वहार भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग बताएकी हुन्।
बिदा हुन लागेका एक वरिष्ठ अधिकारीका लागि आयोजित उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँ पनि सहभागी भएका थिए। आरोपित व्यक्ति पनि सैनिक हुन्। यस विषयमा उनीसँग सोधपुछ गरिएको छ। तर हालसम्म उनीवि’रु’द्ध कुनै अभयोग लगाइएको छैन।
लिबरेशन नामक पत्रिकाले शुक्रवार पहिलो पटक उक्त आरोपबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो। पीडित भनिएकी महिला र अभियुक्त दुवै जना राष्ट्रपति भवनको उच्च सुरक्षा अधिकारीको कार्यालयमा कार्यरत थिए। पत्रिकामा जनाइ अनुसार उनीहरू एकअर्कासँग परिचित थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले एएफपी समाचारसंस्थासँग भने, ‘अधिकारीहरूलाई आरोपबारे थाहा हुनासाथ पीडित भनिएकी महिलालाई सहयोग गर्न आवश्यक कदम चालियो।” अहिले ती दुवै जनालाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ।
घटनाअनुसार प्यारिसस्थित बीबीसी संवाददाता ह्यू शोफील्डका अनुसार गत जुलाई १ को साँझ राष्ट्रपति माक्रोँको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटेका एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलाई बिदा गर्न एलीजी दरबारमा उक्त भोज आयोजना गरिएको थियो।
राष्ट्रपति छोटो मन्तव्य राखेर निस्किए। तर पछि मदिरापानको कार्यक्रम चलिरहेको बताइन्छ। सोही कार्यक्रममा एक पुरुष सहकर्मीले आफूसँग यौ’निक दु’र्व्य’वहार गरेको ती महिला सैनिकको दाबी छ।
घटना भएको भोलिपल्टै ती महिलाले प्रहरीमा औपचारिक उ’जुरी दिइन्। त्यसको केही समयपछि घटनाबारे आप’रा’धिक अनुसन्धान सुरु भयो। कथित पीडकलाई “सहायताप्राप्त साक्षी”को रूपमा राखिएको थियो। त्यसको अर्थ उनी अभियोग लाग्नुभन्दा एक चरणअघि छन्।
यसँसगै केही वर्षयता फ्रान्सको समाजमा यौ न दु’र्व्य’वहा’रका धेरै घटनाहरू बढ्दो रूपमा बाहिर आइरहेका छन्। राष्ट्रपति मा’क्रोँले महिलावि’रु’द्ध हुने हिं’सा’को समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
साथै उनको सरकारले गत मार्चमा भएका केही घटनाको प्रतिक्रियास्वरूप नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सार्यो। अहिले फ्रान्समा सहमतिमा यौ’न सम्बन्ध राख्न १५ वर्ष उमेर भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
आगामी वर्ष एप्रिल मा हुने निर्वाचनमा माक्रोँले दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि हालसम्म उनले त्यसबारे औपचारिक घोषणा गरेका छैनन्।